We.com.mm - ကျန်းမာရေးအတွက် အထူးကောင်းမွန်စေမယ့် ရေသောက်နည်း (၅)မျိုး
ရေဆိုတာ အရည်တွေထဲက အကျိုးကျေးဇူးအများဆုံးပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုဆိုမမှားပါဘူး။ ရေဓာတ်ကုန်ခမ်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခြားကျန်းမာရေးအတွက် ပဲဖြစ်ဖြစ် ရေဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပါ။ ရေအသက် တမနက် ဆိုတာ အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ရေဟာ များစွာအထောက်အကူ အကျိုးပြုစေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရေကို တခြားနည်းနဲ့ အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်ဆိုတာ အားလုံးကသိပ်မသိကြသေးပါဘူး။ သင့်ရဲ့ အစာချေဖျက်ခြင်းလုပ်ငန်းအပြင် တခြား ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့.....
1. သင့်သောက်သုံးတဲ့ရေထဲကို သံပရိုသီးထည့်လိုက်ပါ
အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ သံပရိုသီးထဲမှာ Vitamin C ပါဝင်ပါတယ်။ သံပရိုသီး ၄ ခြမ်း ဒါမှမဟုတ် ၅ ခြမ်း ပါးပါးလေးလှီးပြီး ထည့်လိုက်ပါ။ ထိုရေကို သောက်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့်အပြင် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ကောင်းတာနောက်တစ်ခုကတော့ သံပရိုသီးမှာပါဝင်တဲ့ အက်စစ်ဓာတ်နဲ့ သင့်ဆီမှာမူလအတိုင်းရှိနေတဲ့ အက်စစ်ဓာတ်ဟာ တူညီနိုင်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် သံပရိုသီး နှင့် ရောထားတဲ့ရေတွေက အသည်းကို သည်းခြေရည်တွေ ထုတ်ပေးပြီး အစာအိမ်လမ်းကြောင်းထဲကအစာတွေကို ကြေသွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတာလေ။ ဒါကြောင့် အစာမကြေဖြစ်တာ၊ ကျပ်တိုက်တာ ဗိုက်ဖောင်းတာ၊ လေထတာတို့ ကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
2. ပူစီနံအရွက်တွေကို အသုံးပြုပါ
ပူစီနံအရွက်ကို ရေထဲထည့်လိုက်ရတာဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်နိုင်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းများစွာရှိပါတယ်။ အကျိုးပြုနိုင်ဆုံးတွေထဲကတစ်ခုကတော့ သင့်ဝမ်းဗိုက်ပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ အစာချေဖျက်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဗိုက်အောင့်ခြင်း စသဖြင့်ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးဘက်ဝင်အရွက်တွေကတော့ တံတွေးသန့်စင်ဖို့အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ စားသောက်ဆိုင်တွေတော်တော်များများထဲက ဟင်းပွဲတွေမှာဆိုရင် ပူစီနံဟာ အမြဲတမ်းလိုလိုမြင်ရမှာပါ။ ဒါဟာ အစာစားပြီးရင် ခံတွင်းသန့်ရှင်းဖို့အတွက် လုံးဝအထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အစာချေဖျက်ခြင်းပြဿနာအတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်ကို သွားပြီးသတိရလိုက်ပါ။ သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်ဟာ ဆေးပညာလောကမှာများ နေရာတော်တော်များများမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဗိုက်နာဗိုက်အောင့်တာတွေ ကြုံနေရပြီးဆိုရင် သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်တစ်ချောင်းကို ရေနွေးတစ်ခွက်နှင့်ရောပြီးသောက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ သည့်အပြင် သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်ဟာလည်း လေထိုးလေအောင့်နာတာတွေ အန်ချင်လာတာတွေ ဖြစ်ရင် အထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
သစ်ကြမ်းပိုးခေါက်လိုပါပဲ ဂျင်းသည်လည်း ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အူထဲမှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ Gas တွေကို ဖျက်စီးပေးပါတယ်။ ဂျင်းတွေကိုရေနဲ့ရောပြီး တစ်ညသာထားလိုက်ခြင်းဖြင့် နောက်နေ့မှာ ရရှိလာရဲ့ ဂျင်းရေကို သောက်ပေးခြင်းဟာ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါများကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။
5. ရေအေးအေးထဲမှာ သခွားသီးထည့်ပါ
သခွားသီးထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Vitamin B ဟာ စိတ်ဖီးစီမှုကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီ အစာချေဖျက်ခြင်း အခန်းကဏ္ဍမှာလည်း အထောက်အကူပေးပါတယ်။ ရေအေးနဲ့ရောပြီးရရှိလာတဲ့ သခွားသီးအရည်ဟာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာမရှိပေမယ့် အသားအရေစိုပြေစေခြင်း ဗိုက်အောင့်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
ခရေပန်းရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးဝင်ပုံများ
သွေးတိုးရောဂါမဖြစ်စေရန် ပြုမူနေထိုင်သင့်တဲ့ အချက်များ
ကျန်းမာရေးအတွက်သာမက အလှအပအတွက်ပါအသုံးဝင်တဲ့ လိမ္မော်ရောင်ဖျော်ရည်…။
နံနက်ပိုင်းရေချိုးခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ